जनताले सरकार भएको आभास कहिले पाउने ? - नेपालबहस
जनताद्धारा अनुमोदित, जनताको विकास र देशको निकासका लागि बनेको नेकपाको सरकारले देश र जनताका पक्षमा अहिलेसम्म गरेका कामहरुका फेहरिस्त हेर्दा कुनै पनि गतिलो कामको चुरो समात्न सकिने ठाँउ भेटिदैन । यो सरकारबाट नेपाली जनताले चाहेको आमुल परिवर्तनको सपना पुरा हुने खालको आभास कही कतै पनि देखिदैन ।
नेपाली जनता भोको पेटमा करङ्गको सारंगी बजाउँदै नाङ्गा पैतालाले तातो राजमार्ग टेकेर देश नापिरहेका बेला नागरिकका लागि आशावादी हुनुपर्ने यो सरकारले भोको पेटमा अन्न पुग्ने कुनै गतिलो र भरपर्दो काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारका काम कार्वाही सन्तोषजनक हुन सकेनन् भनेर जनताका समस्या लिएर यो देशमा कुनै दर्बिलो प्रतिपक्ष सडकमा आउन समेत सकिरहेको छैन ।
खानै नपाएर अब कुनैपनि नेपाली नागरिकले मर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन किनकी अब यो देशमा गरिब, सर्वहारा, कर्महारा, दीन, दुःखी, किसान, मजदुर, उद्योगी, व्यापारीको पक्षमा दशकौं राजनीति गरेर खारिएर आएका नेता छन्, जनताको मन र मुटुमा बसेको कम्यूनिष्ट सरकार बनेको छ भनेर शपथ खाएका वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट आम नेपाली जनताले निकै ठूलो आशा र भरोषा राखेका थिए । तर जनतालाई आश्वासनका पोका देखाएर आफु र आफ्ना आसेपासेको भुडी मात्रै भर्न अग्रसर देशका प्रधानमन्त्री आफु सुत्केरी भएर कुना पसेको पनि अब त बर्षौ भैसकेको छ ।
यहि समयमा तराई डुवानमा परेर र पहाडमा पहिरो झरेर सयौं नेपाली नागरिकको ज्यानै गैसकेको छ । नत कुनै राहत, नत उद्धार र पुर्नस्थापना जनता आकाशको छानो लगाएर बसेको पनि महिनौ भैसकेको छ । तर पीडित जनताले कही कतै पनि सरकार भएको आभाससम्म पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । बिशुद्ध पानी र पौष्टिक आहारको कमीका कारण बर्षेनी कुपोषणको शिकार बन्न लाखौ बालबालिकाहरु बाध्य छन् ।
सुनिन्छ, देशका प्रधानमन्त्री नै आफ्नाे न्वारानदेखिको बल लगाएर हत्यामा संलग्न भई आजीवन काराबासको सजाय पाएका अपराधीलाई छुटाउन लागि परेका छन् । फेरी जनताद्धारा निर्वाचित आफु जस्तै जनताको प्रतिनिधिलाई भने कसरी जेलमै सडाउन सकिन्छ भनेर भए नभएका प्रमाण पनि जुटाई रहेकाछन् । सरकारले हावादारी गफकै भरमा विकासको मुल फुटाउछ । जनता आफ्नै सरकारबाट घरबास र खाने अन्न लुटाउछ । जनताका घर गोठमा आगो लगाउन समेतपछि नपर्ने सरकारबाट जनताले कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा राखिदिनु पर्ने हो ? अब त यो नेपाली जनताको आधिकारिक अभिभावकको जिम्मेवारी लिएको सरकार हो कि जनतामारा अपराधीहरुको झुण्ड हो ?? भनेर अनुसन्धान पो गर्नु पर्ने भो ।
सरकारका गृहमन्त्री सार्वजनिक समारोहमै स्थानीय तहमा भएको व्यापक भ्रष्टाचारलाई लाजै नमानी आफैं स्वीकार्छन् ।भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गरे केन्द्रिय सरकार मात्र हैन स्थानीय तह नै खाली हुने भएकोले अहिल्यै कार्वाही गर्न सकिदैन भनेर सार्वजनिक समारोहमै बताउदै हिडछन् । जनता सरकारको कुरा सुनेर कुरीकुरी मान्छन् । सरकार यसैलाई आफ्नाे पुरुषार्थ र बहादुरी ठान्छन् । जब् देशका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिन्छन् तब् भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्नुको सट्टा भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छर्किएर चोख्याउँदै तुलो लिएर बचाउ गर्न बिरामीले थलिएका बुढा प्रधानमन्त्री आफै बालुवाटारबाट बाहिर निस्कन्छन् । सरकारका मन्त्री नै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा डुङ्गडुङ्गती गन्हाउछन् । भ्रष्टाचार भएको देख्ने आँखामा मोतियाबिन्दू लागेको हुनुपर्छ भनेर उल्टै थर्काउँछन् । सरकारलाई देश विकासको कुनै दरकार नै छैन । आफ्नाे कुर्सी जोगाउनु भन्दा अर्को कुनै सरोकार नै छैन । मुलुकमा विदेशी ऋणको भार ११ खर्ब नाघिसक्यो, देशका कण्डक्टरहरु अझै पनि गाडी मालिक डुबाउने ध्याउन्नमै ब्यस्त छन् ।
सामन्ती शोषकका ठूला ठूला महलहरु कब्जा गरेर गरिब जनतालाई बाँडछौ भन्ने सर्वहारा जनताका बिलासी नेताहरु पनि यत्रतत्र सडकमा डाँमेर छोडेका साँढेहरु जस्तो गरी डुक्रिरहेकै देखिन्छन् । देश चलाउने पाईलटका घरभेटीले देश बनाउने ठेक्का पाउँछन् । जिम्मा लिएको काम १० बर्ष बितिसक्दा पनि ज्यूँ का त्यूँ छन् । देशका नेता सय पचास सुरक्षाकर्मी अगाडि पछाडि नलिई हिडनै सक्दैनन् । राष्ट्रियता गीत गाउने र सडक पेटीमा बेची खाने भाँडो भो, अझै पनि सोझा जनता यसैलाई विकासको मुल फुटेको मान्दैछन् ।
सदियौंदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेका गुठी, संस्थान, बिद्यालय, मठ, मन्दिर, लगायत सार्वजनिक सम्पत्तिमा अहिलेको सरकारका सारथीहरुले आफैले आँखा लाउन थालेका छन् । बालुवाटारमा सरकार आफैले खान नपाएको सुकुम्बासी पालेको छ । जनताका आँखामा भने सधैं राष्ट्रवादको छारो हालेको छ । तस्करी र कालोबजारीसँग मात्रै सरकारको सधैं उठबस हुन्छ । यस्तो देखेपछि तिनै नेताले देश बनाउलान भनेर जनताले भोट हालेर पठाउँदा गल्ती गरिएछ भन्दै सर्वसाधारण जनताको मन रुन्छ ।
सर्वसाधारण किसान अहिले खेतीमा लगाउने मल नपाएर हैरान छन् । सलहले लगाएको बाली सिनित्तै पारिदेला भन्ने अर्को ठूलो चिन्ता थपिएको छ । बसिरहेको घरमा सरकार आफैले आएर आगो लगाई देला भन्ने पीरले नागरिक बेलुका निदाउन समेत छोडेका छन् । तराईमा बाढी पसेर घरबारबिहिन भएका जनतालाई भरे बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । पहिरोमा परेर कुन बेला मरिएला भन्ने चिन्ताले कति नेपालीको मन पिरोलिएको छ । जनताले लगाएको बाली बगरमा परिणत हुँदाको चिन्ता एकातिर छ भने साहुको ऋण अब के बेचेर तिर्ने भन्ने चिन्ता अर्कोतिर छ । आहतमा रहेका जनताका लागि राहत बन्न यो देशमा कुनै सरकार बन्नै सकेको छैन ।
मेरो देशको सरकारले यी यी काममा मलाई सहयोग गर्छ भनेर नेपाली जनताले निर्धक्कका साथ भन्नै सकेको छैन । जहाँ दिनदहाडै राज्यपक्षबाटै अबोध चेलीको अस्मिता लुटिन्छ, जहाँ न्यायको भिख माग्न जाँदा निरपराध नागरिक कुटिन्छ । जहाँ देशको प्रधानमन्त्रीले देशको सीमाना कहाँसम्म पर्छ भनेर हेरेको पनि हुदैन । जहाँ देशको सरकारलाई छिमेकीले सीमानाको पिल्लर सारेको थाहासम्म हुँदैन । यस्तो अवस्थामा यो देशमा सरकार भएको आभास नेपाली जनताले कहिले पाउने हो ? जनताका समस्यामा सरकारको ध्यान कहिलेसम्ममा जाने हो ?
प्रधानमन्त्रीले भने, आदिवासीआर्थिक समानतासहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार सक्रिय छ
गुरुयोजनाअनुसार अयोध्याधाम बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
Previous articleविरगञ्जका मेयरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
Next articleवीरगञ्जमा कोरोना सङ्क्रमणको त्रास : चिकित्सकसहितको विज्ञ टोली पठाउन माग
सिल गरिएको ट्राफिक कार्यालय